Shintsha UMTHETHO ku-SAT: U-2017 Ithebhile yokuguqulwa kweMaphu
UMTHETHO no-SAT bahluke kakhulu, kodwa unokwenza utshintsho olubi
Kwitheyibhile engezantsi, unokuguqula ukufundwa kwe-ACT kunye nezibalo zamatriki kwi-SAT yokufunda nokufunda izibalo. Amanani amanqaku e-SAT aphuma ngo-2017 kwaye abhekiselele idatha esuka kwi-SAT ephinda ihlaziywe yenziwa ngo-2016. Ukulingana kwabalinganiswa ngokusetyenziswa kwamaphikenti ahambelana namanqaku ngamnye.
Qaphela ukuba inkcazo yempembelelo efanelekileyo ye-SAT kunye nemigangatho emihle ye-ACT iya kuxhomekeka kwiikholeji ozisebenzisayo.
Kwezinye izikolo i-500 kwimathematika iyanele ngokwaneleyo yokwamkelwa, ngelixa eyunivesithi ekhethileyo kakhulu uya kuba nama-700 okanye ngaphezulu.
Shintsha UMTHETHO kwiSAT
I-SAT ERW / ACT ACT IMathematika
SAT UMTHETHO % SAT UMTHETHO %
Ukufumana enye idatha ye-Granular ye-ACT, khangela iinkqubo zesizwe kwi -website ye-ACT . Kwi-SAT, tyelela ikhasi leNgcaciso lakho leeNgcaciso kwiwebsite ye-SAT uze ucofe ufike kwi-rankings yakamuva ye-percentile yovavanyo.
Ingxoxo ye-SAT ne-ACT Score Conversions
Abafundi bahlala befuna ukwazi ukuba umsebenzi wabo we-ACT uthini xa kuthelekiswa namanqaku e-SAT (kunye ne-vice-versa).
Qaphela ukuba nayiphi na ukuguqulwa kukulingana okungekho nto. I-SAT inamacandelo amabini: UkuFunda kweMathematika kunye noBungqina (kunye necandelo lokubhala ngokuzikhethela). UMTHETHO unamacandelo amane: uLwimi lwesiNgesi, iMathematika, UkuFunda okuBalulekileyo, kunye neSayensi (kunye necandelo lokubhala ngokuzikhethela).
Ukususela ngo-Matshi ka-2016, umxholo weemviwo waba yinto efana nokufana noviwo oluye ngokusebenza ukuvavanya oko abafundi abaye bafunda esikolweni (i-SAT isetyenziselwa ukulinganisa abafundi ukufaneleka , abafundi abakwazi ukufunda kunokuba umfundi wayefundile). Nangona kunjalo, xa siqhathanisa amanqaku e-ACT kwii-SAT izikolo, siqhathanisa izinto ezimbini ezahlukeneyo kunye neentlobo ezahlukeneyo zeemibuzo kunye nexesha elithile elivunyelwe ngombuzo ngamnye. Nokuba 36 kwi-ACT ayilingana ne-800 kwi-SAT. Iimvavanyo zilinganisa izinto ezihlukeneyo, ngoko ke amanqaku aphelileyo kwiimvavanyo enye ayithethi into efanayo njengamanqaku aphelileyo kwenye.
Ukuba, nangona kunjalo, sijonge ipesenteji yabafundi ababalawula ngaphantsi kwamanqaku athile, sinokuzama ukuthelekisa. Ngokomzekelo, kwicandelo leMathematika le-SAT, abafundi abangama-49% bafumana amanqaku ama-520 okanye aphantsi.
Kwimigangatho ye-Math Math umgca we-49% uwela kumanqaku angama-19. Ngako-ke, i-19 kwi-ACT yomthamo wezibalo ibonakala ifana ne-520 kwi-SAT math math.
Kwakhona, ezi manani azilinganisi into efanayo, kodwa zivumela ukuba siqhathanise ukusebenza kweqela elinye labafundi kwenye.
Ngamafutshane, idatha etafileni apha ngasentla ifanele ithathwe ukuba yintoni efanelekileyo. Yindlela nje ekhawulezayo neyongcolileyo yokubona ukuba i-SAT ne-ACT scores ziwa njani kwiifencenti ezifanayo.
Igama lokugqibela kwiinguqulelo zokuhlaziya
Itheyibhile inokukunika ingqiqo yoluhlobo lwamanqaku oza kuwufuna kwikholeji eliphezulu. Iikholeji ezikhethiweyo zelizwe zivame ukuvuma abafundi abahlelwe kwi-10% ephezulu yeklasini yabo. Eyona ndlela, abo bafake izicelo nabo banamanqaku okuvavanya aphezulu kwi-10% yabo bonke abavavanya ukuvavanya (ukuba akukho phezulu). Ukuze ube ngowona-10% ophezulu wokuvavanya uvavanyo, ufuna ukufumana u-670 SAT Uvavanyo olusekelwe kwi-ACT okanye u-30 UMTHETHO weNgesi, kwaye unokufuna amanqaku ama-680 SAT Math okanye iMAT Math ACT.
Ngokubanzi, izikolo ze-SAT kwii-700s kunye ne-ACT izikolo kwi-30s ziya kuba zikhuphisana kakhulu kwiikholeji eziphezulu nakwiiyunivesithi.
I-SAT Score Ukuqhathaniswa kokungena kwii-Arkansas iikholeji
UMTHETHO Ulinganisa ukungeniswa kwiIyunivesithi ye-Sun kwiNkomfa ye-Sun
Uhlalutyo lwesiCwangciso seCandelo lokuCandwa kweeArchaeology
In-N-Out Cup yaseBurger ithi "Yibani uSathana"
Ngaba uMama neNtombi babenqatshelwe kwi-Disneyland ye "Mouse Boobs"?
IAvenws University Admissions
I-Gear Gear: Into oyifunayo kunye noko ungayithandi
Iingcebiso zokufumana ukugqithana
UkuLawulwa kwePosi yeMfazwe Yehlabathi II
Kutheni i-Cold French Fry I-taste is So Much
Indlela Yokuqala Ukubonwa Kwebhanqa Yamatyala
Iingcaciso zeBhiliyo zoMoya oPhephayo
Yenza i-pieters dans le plat
I-10 Essential Collections ye-Kids
I-Ithaca College Admissions
Yintoni iLineman ehlaselayo?
I-15 ephezulu yeyona nto ibaluleke kakhulu